Fetin’ny paska : Olona 151 no voasambotry ny polisim-pirenena -
AccueilSongandinaFetin’ny paska : Olona 151 no voasambotry ny polisim-pirenena
Tamin’ny ankapobeny, dia azo lazaina ho nilamina ny faran’ny herinandron’ny paska teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Samy nandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay avy ka vitsy ny namoy ny ainy, nihena ireo naratra sy nampidirina hopitaly, ary nahitana fihenany toraka izay ihany koa ny resaka asan-jiolahy noho ny fepetra noraisin’ ny mpitandro filaminana.
Araka ny tatitra avy eo anivon’ny polisim-pirenena, dia olona miisa 151 no voasambotr’izy ireo teto an-drenivohitra noho ny resaka fandikan-dalaàna maro samihafa nanomboka ny 29 martsa ka hatramin’ny alatsinain’ny paska lasa teo. Ny 58 tamin’izy ireo, dia olona nampiahiahy avokoa ka tsy maintsy nojerena sy nalaina am-bavany ho fisorohana ny asa ratsy. Miisa 43 ny sinto-mahery, 10 no tsy maintsy nosamborina noho ny hamamoana diso tafahoatra teny an-dalambe, 06 ny isan’ireo mpangalatra tratra am-bodiomby, 05 ny resaka harom-paosy, ary 04 no notanana noho ny fitazonana sy ny fidorohana zava-mahadomelina. Mahakasika ny lozam-pifamoivoizana kosa, dia nahitana tranga miisa 28 izany teto Antananarivo izay marihina fa tsy nahafatesan’olona. Niisa 06 ny fifandonana teo amin’ny fiara samy fiara, ka ny 02 tamin’ireo dia nitari-dositra nitsoaka. 20 ny trangana fifamonoana teny anivon’ny fiarahamonina, ka olona 29 no naratra tao anatin’izany. Raha ny voalazan’ny teo anivon’ity vondron-kery ity, dia azo hatao ho nilamina ny fetin’ny paska tamin’ity taona 2018 ity. Isan’ny nahazoana izany vokatra izany sy nampiavaka ny fandraisan’andraikitra nataon’izy ireo ihany koa ny fiompanana kokoa tany amin’ny resaka fandriam-pahalemana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana, izay tena mampiferotr’aina ny vahoaka amin’ny andro fety tahaka ireny. Polisy miisa 1167 moa no nahetsika teto an-drenivohitra, ka ny 706 tamin’ireo dia natokana hiandraikitra fotsiny ny filaminana. Napetraka teny an-dalambe handamina ny fifamoivoizana sy hanala ny fitohanana kosa ireo 461 ambiny, ka tsy dia nahitana olana loatra teo amin’io lafiny io raha oharina tamin’ny fankalazana ny fetin’ny paska hatramin’izay.
Raha ny tatitra feno avy amin’ny tompon’andarikitra ambony eo anivon’ny hopitaly Hjra kosa indray, dia olona telo no namoy ny ainy tao amin’ny sampana fameloman’aina sy ny resaka fanapoizinana ny alahady sy alatsinain’ny paska teo. Olona 07 no tsy maintsy notazomina tao an-toerana noho ny resaka fisotroan-toaka diso tafahoatra ny 01 aprily, raha toa ka 06 izay nahitana zaza tsy ampy taona iray izany ny alatsinain’ny paska, 02 aprily. 06 kosa ny trangana famonoan-tena saingy tsy nisy namoy ny ainy izy ireo fa avotra soa aman-tsara avokoa. Raha ny tao amin’ny sampana vonjy taitra indray, dia olona miisa 89 no nandalo tao an-toerana ny alahady, ka ny 36 tamin’izany dia vokatry ny adiady sy ny fifamonoana teny an-dalambe avokoa. 03 tamin’izy ireo no tsy maintsy naiditra hopitaly noho ny voina nahazo azy. 14 ny trangana lozam-pifamoivoizana, ka marary 04 no tsy maintsy notazonina nanaraka fitsaboana tao amin’ity sampandraharaha ity. Fahavoazana teny an-dalana sy tany an-tokantrano kosa ny ambiny. Ho an’ny alatsinain’ny paska indray, dia nahitana fitomboany io salan’isa io, satria dia tafikatra 152 ireo marary nandalo tao amin’ity hopitalim-panjakana ity. Mbola nisongadina tao anatin’izany hatrany ny isan’ireo olona nifamono an-dalambe , izay nahatratra 54 ka ny 04 tamin’izy ireo no nampidirina hopitaly. 38 kosa ny isan’ny lozam-pifamoivoizana ka ny 09 tamin’izy ireo no najanona nanaraka fitsaboana tao an-toerana. Loza niseho tany an-tokantrano sy teny an-dalam-be ihany koa no nameno io salan’isa io.